IBTM World 2019 dia manambara ireo finalist Tech Watch Award
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » IBTM World 2019 dia manambara ireo finalist Tech Watch Award
Oktobra 17, 2019
Tontolo IBTM androany dia nanambara famaranana fito ho an'ny Tech Watch Award malaza amin'ity taona ity. Ary koa orinasa iray no nomena satro-boninahitra ho mpandresy amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny tontolon'ny mpitsara avo lenta, orinasa iray voafantina no ho voafidy ho mpandresy amin'ny People's Choice Award, izay isokafan'ny fifidianana amin'ny alàlan'ny tranokala IBTM.
Samy hampandrenesina amin'ny roa ireo mpandresy IBTM World 2019, izay atao ao Fira Barcelona tamin'ny 19-21 Novambra.
Ireo farany, izay orinasa teknolojia misy vokatra na serivisy vaovao mifandraika amin'ny indostrian'ny fihaonana sy ny hetsika, dia hanana fotoana hanehoana ny vokatr'izy ireo amin'ireo mpividy eran-tany an'arivony malaza, mpanan-kery ary haino aman-jery amin'ny sehatra haingam-pandeha IBTM World - vaovao faritra misy ny fizarana ho an'ny taona 2019.
Ny lalao famaranana amin'ity taona ity dia: AllSeated, rindrambaiko manaingo sary amin'ny habakabaka mampiasa teknolojia VR (zava-misy virtoaly); G-SMATT America, rindrina teknolojia LED mampiseho mpamatsy; Lineup Ninja, rindrambaiko fitantanana ampiasaina hitantanana ny atiny amin'ny kaonferansa; Oveit, rafitra fandoavam-bola / badging ary NFC (serasera akaiky) ny rafitra fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny teknolojia blockchain; TrackMany avy amin'i Pixel Light, fitaovana fanaovana fanadihadiana manome metatra toy ny lamin'ny fifamoivoizana, ny isan'ny mpitsidika, ny firosoana, ny fotoana iainana, ny taonany, ny maha-lahy na ny vavy sy ny sentiment azy; wordly, Inc, izay mampiasa AI (intelligence artifisialy) hanaterana fandikan-teny mandeha ho azy, mandeha ho azy; ary Zenus, teknolojia famantaran-tarehy ampiasaina hanatsarana ny fizotran'ny fizahana maso, hanatsara ny fiarovana ary hamerina ny angona data.
David Thompson, talen'ny Event, IBTM World, dia naneho hevitra hoe: "Ny hatsarana amin'ny haitao misy ny zava-bita nasehon'ny finaliste tamin'ity taona ity dia miavaka, na amin'ny lafiny maro amin'ny serivisy sy tombontsoa omen'izy ireo ny indostrianay, fa koa ny haavon'ny fanavaozana asehon'izy ireo . Ny mpanjifanay dia ho afaka hiaina sy hifanerasera amina teknolojia vaovao mampientanentana isan-karazany izay tena afaka manatsara ny orinasany amin'ny ho avy. ”
Ireo nofaranana dia voafantina miorina amin'ny fepetra marobe, ao anatin'izany ny haavon'ny fanavaozana, ny maha samy hafa ny vokatra eo amin'ny tsena; foto-kevitra sy maodelim-barotra, hatraiza ny fivoaran'ny vokatra; ary ohatrinona ny lanja entiny amin'ny indostria MICE.
Ny mpandray anjara dia hotsarain'ny tontolon'ny manampahaizana fanta-daza amin'ny hetsika sy indostrian'ny haitao, notarihin'ny veterana amin'ny indostrian'ny teknolojia, Corbin Ball. Anisan'ny mpitsara i Michelle Bruno, filohan'ny hetsika sonia ho an'ny vondrona Bruno; Dahlia El Gazzar, Mpanorina ny DAHLIA + Inc; Ruud Janssen, Mpanorina ny TNOC.org ary mpiara-manorina EMG; Pádraic Gilligan, Mpiara-mitantana ao amin'ny SoolNua; Martin Sirk, tompon'ny Sirk Serendipity; ary James Morgan PhD CSEP, mpampianatra lohalaharana amin'ny famolavolana hetsika sy teknolojia ao amin'ny University of Westminster.
Corbin Ball, filohan'ny komity mpitsara ny World Tech Watch IBTM, dia naneho hevitra hoe: "Ny tanjon'ny IBTM Tech Watch Awards dia ny hamantatra ireo fanavaozana amin'ny haitao mifandraika amin'ireo hetsika sy fampirantiana indostrialy ary hanasongadinana ireo fironana teknolojia lehibe. Ny mpifaninana famaranana fito tamin'ity taona ity dia nipoitra avy amin'ny sehatry ny fifaninanana, ary manasongadina fironana teknolojia lehibe izy rehetra, anisan'izany ny AR, VR, ny teknolojia fampisehoana vaovao, ny fitantanana mpandahateny / ny fandaharam-potoana, ny fanekena ny feo ary ny fandrefesana biometrika tsy fantatra anarana. ”
Ny Tech Watch Award dia loka lava indrindra amin'ny indostria amin'ny karazany mitovy aminy, ary eken'ny besinimaro amin'ny indostrian'ny MICE, noho ireo nahazo loka nandritry ny fotoana sy namoaka ny hetsika, ary koa ireo mpitsara manana ny maha izy azy.